မိုးလေဝသဆောင်းပါး | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label မိုးလေဝသဆောင်းပါး. Show all posts
ညို . . . ပြီးတော့ . . . ညာ
အယ်နီညိုနှင့် လာနီညာ ပုံရိပ်များ
အဆော့လွန်နေတဲ့ အပူပိုင်း ဒေသ ကလေးများ
ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံး စာပေ မိတ်ဆက် ရေးသား ခဲ့ပြီး ပထမဆုံး ပုံနှိပ်ဖော်ပြ ခံရတဲ့ ဆောင်းပါးဟာ ‘အယ်လ်နီနို (သို့မဟုတ်) အသစ် တိုးလာသော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် တစ်ခု’ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၃ မေလ ၁၂ ရက်နေ့ထုတ် လုပ်သားပြည်သူ့ နေ့စဉ်သတင်း စာမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဖော်ပြ တော့ ခေါင်းစီးက ‘အယ်လ်နီနို’ လို့ ဖော်ပြ ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော့် ဆရာရင်းဖြစ်တဲ့ မိုး လေဝသ ဖခင်ကြီး ဆရာကြီး ဦးလှ က အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကာလပါ။
ကျွန်တော့်ဆောင်းပါးကို ဆရာကြီးက နယ်စခန်း အသီးသီးမှာ ရှိကြတဲ့ မိုးလေဝသ စခန်းများကို ကူးယူဖြန့်ဝေ သင့်ကြောင်း၊ ဆရာကြီး ဦးလှ ပြီးတော့ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဖြစ်လာတဲ့ ဆရာ ဦးသုတကို ထောက်ခံပေး ခဲ့တာကိုလည်း ကျွန်တော် မှတ်မိနေပါသေးတယ်။
တကယ်တော့ အဲဒီဆောင်းပါး ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ စာပေမိတ် ဆက် ပထမဆုံး ပုံနှိပ်ဖော်ပြခံရတဲ့ ဆောင်းပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆရာကြီးဦးလှက ‘နို’ မဟုတ်ဘူး၊ စပိန်ဘာသာစကား မှာ ‘ညို’လို့ အသံထွက်ရကြောင်း ပြင်ပေးသွား ခဲ့တဲ့ အတွက် နောက် ပိုင်း ကျွန်တော် အမှားကင်းပြီး မှန်သွား ခဲ့ရတာ ယနေ့အထိပါပဲ။
ကြာတော့ကြာပါပြီ။ ၂၇ နှစ် တောင် ရှိခဲ့ပါပြီကော။ ‘‘ဆရာ မပြနည်းမကျ’’လို့ ဒါကြောင့် လူကြီးတွေက ပြောကြတာပေါ့ ဗျာ။ အဲဒီနောက် ‘ဘေးတွေ့နေ သော ပင်လယ်ရေများ-အယ်လ် နီညို (၉၇)’ (မြန်မာ့အလင်း နေ့ စဉ်သတင်းစာ၊ ၁၀-၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၇)၊ ‘လာနီညာ ဆိုတဲ့ မိန်း ကလေး’ (မြန်မာ့အလင်းနေ့စဉ် သတင်းစာ၊ ၂၅ သြဂုတ် ၁၉၉၈)၊ ‘ရာစုနှစ်ရဲ့ အယ်လ်နီညို (၉၇- ၉၈ အယ်လ်နီညို)’ (ပုံနှိပ် မဖော် ပြဖြစ်သေး)တို့ကို ရေးသားခဲ့ဖြစ် ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခုဆောင်း ပါးကို ‘ညို...ပြီးတော့...ညာ (အပူပိုင်းဒေသမှ အဆော့လွန် နေသော ကလေးများ)’လို့ အမည်ပေး ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လ်နီ ညိုရော၊ လာနီညာရော စပိန်ဘာ သာ စကားတွေ ဖြစ်ပြီး အယ်လ်နီ ညိုက ခရစ်၏သားတော် (The Little Boy or Christ Child) လာနီညာက မိန်းကလေး (The LittleGirl) လို့ အဓိပ္ပာယ်တွေ ရပါတယ်။
အခုတော့ ဒီကလေးငယ်နှစ် ဦးဟာ ကလေးများပီပီ အပျော် လွန်ပြီး အဆော့လွန်နေကြပြီလို့ ဆိုရပါတော့မယ်။ ‘ညို...ပြီးတော့ ...့ညာ’၊ ‘ညာ...ပြီးတော့...ညို’နဲ့ ထပ်တလဲလဲ ဖြစ်နေရပါပြီ။ အယ်လ်နီညိုနဲ့ လာနီညာ တို့ရဲ့ နောက်ကြောင်း တကယ်တော့ ၁၉၄၈မှ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အထိ ၆၂ နှစ်တာကာလအတွင်း အယ်လ်နီညိုဖြစ်တဲ့နှစ်က ၂၃ နှစ် (၃၇ ရာခိုင်နှုန်း)၊ လာနီညာဖြစ်တဲ့ နှစ်က ၂၁ နှစ် (၃၄ ရာခိုင်နှုန်း)နဲ့ ကြားနေနှစ်က ၁၈ နှစ် (၂၉ ရာခိုင် နှုန်း) ရှိခဲ့တဲ့အတွက် အယ်လ်နီညိုနဲ့ လာနီညာဖြစ်တဲ့နှစ်တွေဟာ ဆတူ နီးပါးရှိနေပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း စတင်ခဲ့ တဲ့ ၁၉၇၅ ခုနှစ်ရဲ့နောက်ပိုင်း ၃၅ နှစ်တာကာလအတွင်း အယ်လ်နီညိုဖြစ်တဲ့ နှစ်ပေါင်းက (၁၄)ကြိမ် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ခဲ့ပြီး လာနီညာက ရှစ်ကြိမ် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ် မတိုင်မီ ကတော့ အယ်လ်နီညိုက ရှစ်ကြိမ် (၃၅ ရာခိုင်နှုန်း)နဲ့ လာနီညာက ၁၄ ကြိမ် (၅၄ ရာခိုင်နှုန်း) ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၉၇၅ ခုနှစ် ရှေ့ပိုင်းမှာ လာနီညာဖြစ်စဉ်တွေ က ပိုအဖြစ်များပြီး ၁၉၇၅ နောက်ပိုင်း ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့် အယ်လ်နီညို ဖြစ်စဉ်တွေက ပိုအဖြစ်များ လာတာကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ လည်းကောင်းပြီး မကြာမကြာ လည်း တွေ့နေရတာကတော့ အယ်လ်နီညိုပြီးတော့ လာနီညာ ဖြစ်သလို လာနီညာပြီးတော့လည်း အယ်လ်နီညိုဖြစ်တတ်ခြင်းပါပဲ။ ၁၉၆၂ ကနေ ၁၉၇၈ ကာလဟာ ထူးခြားတဲ့ ၁၆ နှစ်တာကာလ တစ်ခု ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါ တယ်။ အကြောင်းကတော့ အဲဒီ ၁၆ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ကြား နေနှစ် ၂ နှစ်သာဖြစ်ခဲ့ပြီး အယ်လ် နီညို ခုနစ်နှစ်နဲ့ လာနီညာခုနစ်နှစ် တစ်လှည့်စီ အပြန်ပြန်အလှန် လှန် ဆတူဖြစ်နေခဲ့တာဟာ ထူး ခြားမှုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင် ဒီ ၁၆ နှစ်တာကာလဟာ ကြားနေနှစ်မှာ မရှိခဲ့ဘဲ အစွန်းနှစ်ဖက် ကို တစ်လှည့်စီ ကူးပြောင်းနေ ခဲ့တာကို ထူးခြားစွာ တွေ့နေခဲ့ရ ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုထူးခြားတာ ကတော့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကာလ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရာသီဥ တုပြောင်းလဲမှုကို လေ့လာတဲ့ အခါ မုတ်သုံရာသီဥတုတွေဟာ အဲဒီထူးခြားကာလအပြီး ၁၉၇၈ ကစပြီး ပြောင်းလဲလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လာနီညာရာသီဥတုဆိုတာ လာနီညာနှစ်ဆိုတာ တကယ် တော့ အယ်လ်နီညိုရဲ့ဆန့်ကျင် ဘက် တစ်ဖက်အစွန်းရောက် ရာသီဥတု တစ်မျိုးပါပဲ။ အယ်လ် နီညိုက ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ ရာသီ ဖောက်ပြန်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေ ပြီး လာနီညာကတော့ အေးပြီး စွတ်စိုတဲ့ရာသီဥတုကို ဖြစ်စေပါ တယ်။ နှစ်မျိုးစလုံး အစွန်းရောက် ရာသီဥတုမို့ သူ့ဟာနဲ့သူ သဘာဝ ဘေးတွေ ပိုလာစေပါတယ်။ အယ်လ်နီညိုရာသီဥတုဟာ အပူ ချိန်တွေမြင့်တက်စေပြီး အပူရှိန် တွေတက်စေတဲ့ အပူပိုဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးရွာသွန်းမှု လျော့ နည်းပြီး မိုးခေါင်စေတယ်။ အခု ၂၀၁၆ နွေမှာ လောလောလတ် လတ် ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ ရာသီ ဥတုမျိုးဆိုပါတော့ဗျာ။ လာနီညာ ရာသီဥတုကတော့ အပူချိန်တွေ လျော့နည်းစေပြီး မိုးများစေတတ် တဲ့ အအေးပိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်မှု များစေတယ်။ ဒီတော့ ရေကြီးမှုဘေးနဲ့မုန်တိုင်း ဘေးတွေ တိုးလာစေပါတယ်။ မိုးတွေများလာတာဟာ ကုန်းမြင့် ဒေသမှာဖြစ်ခဲ့ရင် လျှပ်တစ်ပြက် ရေကြီးမှုဘေးတွေ ကြုံတွေ့ရစေ နိုင်ပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်လို၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းလို အောက်ခြေမြေသား မခိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ မိုးကြီးတော့ မြေပြိုတာတွေ ပါလာတယ်။
လာနီညာ ဖြစ်တဲ့နှစ်တွေ ဟာ မိုးရွာသွန်းမှုတွေ ပိုလေ့ရှိပါ တယ်။ လာနီညာ ဖြစ်စဉ်ဟာ တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ နွေကာလ (ကမ္ဘာ့မြောက်ဘက်ခြမ်း မှာတော့ ဆောင်းကာလဖြစ်တဲ့ ဒီဇင်ဘာမှ ဖေဖော်ဝါရီအထိ ကာလ)မှာ အင်အားအကောင်း ဆုံး ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိုးနှောင်းမိုးလွန်ကာလနဲ့ ဆောင်းရာသီအပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးမှု အများဆုံး ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၆-၁၇ ဟာ လာနီ ညာနှစ်ဖြစ်လာခဲ့ရင် ၂၀၁၈ ရဲ့ မိုးနှောင်း (စက်တင်ဘာ)နဲ့ မိုး လွန် (အောက်တိုဘာနဲ့ နိုဝင်ဘာ)ကာလတွေမှာ မိုးကောင်းစေနိုင် ပါတယ်။ နောက်ပြီး စက်တင်ဘာ နဲ့ အောက်တိုဘာဆိုတာ ပင်လယ်ရေအပူချိန်တွေ အမြင့်ဆုံးဖြစ်လို့မုန်တိုင်းတွေ အများဆုံးဖြစ်လေ့ ရှိတဲ့ကာလမို့ မိုးနှောင်းနဲ့ မိုးလွန်ကာလ မုန်တိုင်းတွေ အဖြစ်များ နိုင်ပါတယ်။ မိုးလွန်မိုးဆိုတော့ ‘အောင်ရေလား၊ ဖျက်မိုးလား’ ဆိုတာကတော့ လုပ်ငန်းအပေါ် မှာ တည်ပါလိမ့်မယ်။ သေချာတာ ကတော့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု လိုအပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ဒီဇင်ဘာကစပြီး ၂၀၁၇ ဖေဖော်ဝါရီအထိကြာမယ့် ဆောင်းရာသီ ဟာ အအေးပိုလာနိုင်ပါတယ်။ အားကောင်းတဲ့ လာနီညာသာ ဖြစ်ခဲ့ရင် ၂၀၁၆-၁၇ ဆောင်း ရာသီကာလ သာမက ၂၀၁၇ နွေရာသီ (မတ်လ၊ ဧပြီနဲ့ မေလ)ပါ အပူလျော့နိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်ဖို့ အလားအလာနဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ
လက်ရှိ တွက်ချက်မှုများအရ တော့ ၂၀၁၆ မှာ လာနီညာနှစ် ဖြစ်လာဖို့ အလားအလာဟာ မေ၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင် သုံးလပေါင်း အပေါ် အခြေခံတွက်ချက်မှုအရ လာနီညာဖြစ်ရန် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေရာက ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်နဲ့ စက်တင်ဘာ သုံးလပေါင်းအပေါ် အခြေခံ တွက်ချက်လိုက်တော့ လာနီညာဖြစ်ဖို့ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်း ရှိလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ တွက်ချက်မှုအရ (က) ၂၀၁၇ ဟာ ဒုတိယအယ်လ်နီညိုနှစ် (အလွန်ပူပြင်းမယ့်နှစ်) မဖြစ်နိုင် တော့ဘူး။ (၂) လာနီညာဖြစ်ဖို့ အလားအလာဟာ ၄ ရာခိုင်နှုန်း ကနေ ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းကို ခုန်တက် လာတာဟာ ဒေသတစ်ခုလုံးရဲ့ ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ကို လက်ရှိပြီးခဲ့ တဲ့ကာလနဲ့ လုံးဝပြောင်းပြန် ဖြစ် သွားစေနိုင်ပါတယ်။ (၃) လာနီ ညာနှစ်တွေမှာ မိုးပိုများနိုင်တယ်။ မုန်တိုင်းပိုအဖြစ်များနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သဘာဝဘေးတွေကို ပိုဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
လာနီညာနှစ်တွေရဲ့ အရေး ကြီးတဲ့အချက်
ဂျပန်မိုးလေဝသ ပညာရှင် များရဲ့ တွေ့ရှိထားချက် တစ်ခု ဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေး ကြီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို မုန်တိုင်းများဟာ လာနီညာနှစ်တွေမှာ ပိုမိုဝင်တတ် ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဘေးတွေ့နေတဲ့ပင်လယ် ရေတွေဟာ ဒီနှစ်အတွင်း ဘယ်လို သဘာဝဘေးတွေ သယ်ဆောင်လာနိုင် တယ်ဆိုတာ ကြိုတင်တွက်ဆ ထားနိုင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ ဒီလိုဒုက္ခဘေး(Hazard)တွေဆိုတာ လူ့ လောကမှာ လူသားတိုင်း တွေ့ကြ ရမယ့် သဘောတရားတွေပါပဲ။ လူ့ဘဝမှာ မတွေ့ချင်လို့လည်း မရတဲ့ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တဆိုတဲ့ တရားတွေလိုပါပဲ။ အဲ...အဲဒီဒုက္ခဘေး (Hazard)တွေကို ဘေးဒုက္ခ (Disaster) မဖြစ် ရလေအောင် လူတွေရဲ့ အသိ တရားတွေ၊ သတိတရားတွေ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေ၊ ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့သာ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြမှသာ သဘာဝ ဘေးကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေ နဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးရမှုတွေကို လျော့ ပါးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမှာ အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ သဘာဝ ဘေးကာကွယ်ရေး (Disaster Prevention) မဟုတ်ပါဘူး။ သဘာဝဘေးကြောင့် ပျက်စီးဆုံး ရှုံးမှုကာကွယ်ရေး (Disaster Loss Prevention)သာဖြစ် ကြောင်းပါ။
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/62700
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, April 22, 2016 No comments: